Puntland: Siciid Raage "Dekedda Boosaaso cidna uma xirna" [Dhagayso]
GAROOWE, Puntland- Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo gaadiidka Badda ee Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa beeniyay warar sheegaya in dekedda Boosaaso ay xirnayd maalmahan kadib markii lacag lagusoo kordhiyay dadkii wax kala soo degi jiray iyo doonyaha kusoo xirta.
Raage oo la hadlayay Radio Garowe ayaa sheegay in dekeddu aysan u xirnayn cid gaara, balse ay jirtay kala aragti duwanaan ka dhalatay Ascaarta la qaadayo maadama lasoo kordhiyay qalab lagu hubinayo tayada badeecooyinka, arrintaasna laga heshiiyay.
Ganacsatada ayuu ku eedeeyay inay raadinayaan mashaakilaad uusan cadayn waxa ay tahay.
"Ganacsatada ayaa moodaa inay raadinayaan mashaakilaad qofkii nimcada haystay maaha inuu ku cayaaro, anaga saxaafadda ayaan ka hadalnay waanu sheegnay inaysan dekeddu xirnay, waxna la kordhin, umaddana waxba lagu kordhin hay'addii la wareegtayna ilaa hada aanay wax kordhin." sidaas waxaa yiri Siciid Maxamed Raage.
Wasiirka ayaa digniin u jeediyay gaadiidlayda iyo ganacsatada, wuxuuna ugu baaqay inay u turaan shacabkooda.
"Waxaan u digayaan ganacsatada iyo gaadiidlayda oo aan leeyahay dadkiina u tura, waxaana sidoo kale idiin sheegayaa in dekeddu aysan xirnayn, cidna u xirnay, wax lasoo kordhiyayna aysan jirin." ayuu wasiirku hadalkiisa kusii daray.
Siciid ayaa sidoo kale tilmaamay in qorshahan ay wadaan ganacsato ay ku dhex jiraan dad kale isagoo intaas ku daray inay kulan isugu yimaadeen oo ay kawada hadleen arrintaas.
"Waxaan wada kulanay ganacsatada waxa kaliya ee aan u sheegnayna waxay ahayd inaan u sheegno in dekedu furantahay oo ay dadka usoo dejiyaan badeecooyinkooda."
Shirkadaan lagu sheegey iney baareyso cuntada ayaa waxaa iska leh ganacsato sharciga Dowlada hadda talada haysa ugu hiileysay iyadoo Wararka qaar xusayaan in Wasiirka Ganacsiga Puntland qayb ka yahay howshaan bilowgeeda.
Hadalka ayaa kusoo beegmay xilli la isla dhex-marayay warar sheegaya in la kordhiyay lacagtii laga qaadi jiray ganacsatada iyo doonyaha iyagoo eeda saaraya shirkadii la wareegtay P&O port.
Mudaharaad rabashado wata ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kadib markii ..
Saraakiil qabtay gacan ku dhiigle Muslimiin laayey oo la abaalmariyey 16.10.2019. 14:08
Itoobiya oo dib u dhigtay Aftida gobol madax banaani doonaya 16.10.2019. 13:45
Taliye ciidan oo isku day dil kaga badbaaday magaaladda Gaalkacyo 16.10.2019. 12:02
Arday ay dowladda deeq waxbarasho u dirtay oo lagu xayiray Addis Ababa 16.10.2019. 08:50